Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e: fahasamihafana misy eo amin'izy roa | Androidsis
Samsung no marika manan-danja indrindra amin'ny sehatry ny takelaka Android. Ny marika koreana no manana ny katalaogy midadasika indrindra eny an-tsena, raha tsy ny omaly ny Galaxy Tab S6 dia nitarina tamin'ny takelaka vaovao, izay miavaka azonao jerena eto. Io no fanombohana farany indrindra an'ny orinasa hatreto amin'ity taona ity, izay efa namela modely maromaro hatreto.
Miaraka amin'ity Galaxy Tab S6 ity dia misy maodely niavaka indrindra ho an'ny marika Koreana, inona ilay Galaxy Tab S5e. Ity takelaka ity Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ho iray amin'ireo maodely Samsung mahaliana indrindra, ankoatra ny fampisehoana ny fanavaozana ny takelaka takelaka misy azy.
Amin'io lafiny io dia hitantsika fa misy fivoarana iray eo amin'ireo fitaovana roa ireo. Raha ny takelaka vaovao no tampon-tampon'ny vaovao, takelaka avo lenta nantsoina hanjakazaka amin'ilay faritra. Ny maodely hafa dia natao ho an'ny elanelam-potoana, na dia ny zavatra mahagaga aza dia misy singa iraisan'ny roa tonta.
1 Famolavolana, fampisehoana ary bateria tsy miova
2 Fijerin'ny fantsom-baravarankely amin'ny Galaxy Tab S6
3 Processeur, RAM ary fitehirizana
Famolavolana, fampisehoana ary bateria tsy miova
Ireo takelaka Samsung roa dia manana endrika mitovy, ankoatry ny fampiasana amin'ny lafiny roa amin'ny tontonana Super 10,5 AMOLED XNUMX santimetatra miaraka amina vahaolana WQXGA. Ka azontsika atao ny mahita fa misy efijery lehibe aseho, izay manome kalitao lehibe hahafahana mahita ireo atiny multimedia ao aminy, izay tsy isalasalana fa zavatra manan-danja.
Ary koa, ny Galaxy Tab S6 sy ny Galaxy Tab S5e Manana bateria 7.040 mAh izy ireo. Bateria mamela antsika hanana fizakan-tena tsara amin'ireto tranga ireto, ho fampiasana tsara, na miasa na mihinana atiny ao. Ary eo amin'ny lafiny fifandraisana dia ahitantsika fahasamihafana vitsivitsy eo amin'ny roa tonta, miaraka amin'ny safidy 4G / LTE na WiFi mitovy, izay mamela antsika hisafidy ny safidy heverin'ny tsirairay fa mety indrindra.
Andininy iray hafa izay misy zavatra iraisana betsaka, saingy tsy mitovy izy ireo, ny fakantsarinao. Tonga ny Galaxy Tab S5e miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny lafiny tsirairay: MP 13 eo an-damosiny ary MP-8 eo anoloana. Raha amin'ny tranga misy ny Galaxy Tab S6 dia ahitantsika ny alàlan'ny 8 MP, izay mety mitovy sensor sy aoriana aoriana, 13 + 5 MP. Noho izany dia nomen'izy ireo sensor fanampiny fanampiny ao aorinan'io.
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Tab A 8.0 (2019)
Fijerin'ny fantsom-baravarankely amin'ny Galaxy Tab S6
Ny iray amin'ireo fanovana lehibe hitantsika tamin'ny fanombohana an'io Galaxy Tab S6 io dia ny toerana misy ny fantsom-panafody. Hatramin'ny takelaka vaovao farany ambony an'ny marika Koreana mampifangaro azy eo amin'ny efijeryo, araka ny hitantsika tamin'ny findainy avo lenta. Noho izany dia lasa iray amin'ireo takelaka voalohany eny an-tsena ny fahazoana miditra amin'ireo endri-javatra ireo. Ka io dia fandrosoana lehibe ho an'ny orinasa.
Raha ny Galaxy Tab S5e, ny sensor sidina dia hita amin'ny iray amin'ireo sisiny. Toerana somary ahazoana aina izy amin'ny takelaka takelaka, izay ahafahana mampiasa tsara. Ankoatry ny famelana ny ao ambadiky ny takelaka hitazomana famolavolana malama, miloka amin'ny fomba fanao minimalist kokoa amin'ity tranga ity. Toy izany koa ny ao amin'ilay takelaka vaovao, izay misy endrika fisaka ao an-damosiny, madio kokoa.
Ny tsirairay amin'ireo takelaka ireo dia mahatratra ny tsenan'ny tsena. Ity dia zavatra iray izay azontsika jerena tsara raha mitandrina ny famaritana azy isika, indrindra amin'ny tranga misy azy. Ny Galaxy Tab S5e dia manana processeur Snapdragon 670 anatiny. Mpikirakira tsara, izay iray amin'ireo mahaliana indrindra ary manolotra fampisehoana tsara indrindra ao anatin'ny elanelam-potoana. Ka ambonin'izany rehetra dia takelaka tsara hahitana ny atiny multimedia.
Etsy ankilany, manana ny Galaxy Tab S6 isika, izay manana Snapdragon 855 ho mpikirakira azy. Ka manana fampisehoana mahatalanjona amin'ity tranga ity, izay tsy isalasalana fa mahatonga azy ho takelaka avo lenta. Io dia ahafahantsika mampiasa azy io na hiasa na handany atiny, nefa tsy midika izany fa ho ambany kokoa ny fahombiazan'ny takelaka. Amin'ity sehatra ity dia tsy afaka mangataka bebe kokoa amin'ny takelaka ianao.
Samy manolotra fitambarana RAM sy fitehirizana samihafa ho anay. Raha ny takelaka afovoany dia misy 4/6 GB eo anelanelany ary 64/128 GB fitehirizana anatiny. Raha ny maodely farany ambony indrindra navelan'ny orinasa koreana antsika dia manana fitambarana roa misy izy: 6/128 GB sy 8/256 GB. Ka aseho azy ho safidy mahery miaraka amin'ny fitehirizana tsara, izay tsy isalasalana fa hamela antsika hitahiry karazana rakitra ao aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e: Inona no niova teo amin'izy ireo